Iker Casillas oo ka noqday musharraxnimada xilka madaxweynaha xiriirka kubadda cagta Spain iyo sababtii uu uga baxay tartanka oo uu shaaciyay – Gool FM
(Madrid) 14 Juun 2020. Halyeyga xulka qaranka Spain ee Iker Casillas ayaa bishii Febraayo ee sanadkan si rasmi ah u xaqiijiyay inuu yahay musharrax u taagan qabashada xilka madaxweyne ee xiriirka kubadda cagta dalka Spain oo magaciisa loo soo gaabiyo RFEF.
Balse afar bilood kaddib, Casillas ayaa la noqday musharraxnimadiisa, isagoo loollanka xilkan u daayay Madaxweyne Luis Rubiales inuu kali ku noqdo kaasoo xilkan hayay tan iyo bishii Maajo (May) ee sanadkii 2018.
Goolhayahii hore ee Real Madrid ayaa tibaaxay in doorashada soo socota aysan xaq iyo caddaalad u ahayn sidii la rabay, sidaas darteedna uu u doortay inuu uga baxo loollanka balse uu diyaar u yahay inuu mar walba caawiyo xiriirka si uu horumar ballaaran u sameeyo.
“Waxaan rabaa doorasho caddaalad ah oo hufan, si dhab ahna looga qayb galo, balse sidaas ma aysan noqon” ayuu yiri Iker Casillas.
Haddii Golaha heerka qaran ee isboortiga ay siiyaan warqadda uu kaga laabtay musharraxnimadiisa, waxay doorashadu dhaceysaa 17-ka bisha Agoosto ee sanadkan.
Sidaas darteed, waxay ay u muuqataa in Rubiales dib loo doorran doono maadaama uusan hadda jirin musharrax u taagan doorashada xilka madaxweynaha xiriirka kubadda cagta dalka Spain.
FIFA oo inka badan 400 ciyaaryahan ka heshay cabasho dhaqaale... (Sidee ayay u maareyn doonaan?)